ဒီအရာတွေကိုသိထားရင် ဘ၀မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့လုံလောက်ပါပြီ… – Trend.com.mm
လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းမှာ ကိုယ်သာဇာတ်လိုက်ပါပဲ။ဘ၀မှာရှင်သန်လာရတဲ့ အခြေအနေချင်းမတူညီကြသလို ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းဆိုတာလည်း မတူညီပါဘူး။ဒီလိုမတူညီတာတွေစုပေါင်းထားတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နဲ့နေထိုင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။အခုခေတ်မှာစာအုပ်တွေထက် အွန်လိုင်းမီဒီယာက စာတွေကိုပိုပြီးဖတ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတွေအပေါ် အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးကရုပ်ရှင်ပြီးရင် စာပေဖြစ်တဲ့အတွက် စာအုပ်ဖြစ်စေ၊အွန်လိုင်းပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့စာပေဖြစ်စေ လူသားတွေအတွက်အဆိပ်အတောက်မဖြစ်စေပဲ အကျိုးပြုစေနိုင်တဲ့စာပေတွေ
ဒီနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာစားဝတ်နေရေးပြေလည်အောင်လှုပ်ရှားနေရတဲ့အတွက် အဆင်မပြေမှုတွေလည်းကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်သလို အခက်အခဲတွေတွေ့လာ
ရင်စိတ်ပျက်အားလျော့မိတာတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။နေတတ်ရင် ဘ၀ကြီးက ကျေနပ်စရာကြီးပါ။အခု ဒီစာကိုလည်း ဘ၀မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအရာတွေကိုသိထားရင် ဘ၀မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့လုံလောက်ပါပြီ။
၁) ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာတွေအတွက် စိတ်ပင်ပန်းမခံပါနဲ့
ကိုယ်ကြုံတွေ့ရသမျှထဲမှာ ပြောင်းလဲလို့ရတာလည်းရှိသလို ပြောင်းလဲလို့မရတော့တဲ့အရာတွေ ရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်အတိတ်ပေါ့။အတိတ်ဆိုတာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ အတိတ်မှာ ကောင်းတာပဲကြုံခဲ့ကြုံခဲ့၊ဆိုးတာပဲကြုံခဲ့ကြုံခဲ့ဘာမှပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး။”နေလုံးကြီးကွယ်ပျောက်သွားတာကိုထိုင်ပူဆွေးနေမယ်ဆိုရင် လမင်းကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်ကို သင်လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်” ဆိုတဲ့စကားရှိသလို ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုပူဆွေးသောကရောက်နေမယ် ဆိုရင် အကောင်းတွေကြုံလာတဲ့အခါ သေချာဖမ်းဆုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဟန်ဆောင်တာက ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။စိတ်ညစ်နေရင် စိတ်ညစ်နေတယ်ပြောပါ။ ပင်ပန်းနေရင် ပင်ပန်းနေတယ်ပြောပါ။သူများကကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယူကိုင်တာ ၊ယူသုံးတာမကြိုက်ရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ။ခံစားချက်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောပဲ မြိုသိပ်ထားပြီး တစ်ခြားသူ အဆင်ပြေအောင်၊နားဝင်ချိုအောင်ပြောနေတာက ကြာလာရင်စိတ်ဖိစီးမှုများလာပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ။
လူတွေက ကိုယ့်အကြောင်းထက်သူများအကြောင်းကိုပြောရတာပိုပြီး သဘောကျကြတယ် မဟုတ်လား။ဒီလိုပြောကြတဲ့အထဲ ကိုယ်လည်းပါနိုင်တယ်၊သူများတွေလည်း ကိုယ့်အကြောင်းပြောနိုင်တယ်။သူများအကြောင်းပြောလို့ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိ၊သူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်လေကုန်တာပဲအဖတ်တင်တယ်ဟုတ်! သူများက ကိုယ့်အကြောင်းပြောရင်လည်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခံပြီးတစ်ချိန်လုံးခေါင်းထဲထည့်မထားပါနဲ့။ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးရင် နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး ငါဒီနေ့သူများအကြောင်းပြောခဲ့လား၊အကျိုးရှိလား၊ အကျိုးမရှိရင်နောက်ထပ်မပြောဖို့၊ပြောခဲ့ဖူးတာတွေကိုလည်းခေါင်းထဲကထုတ်ပစ်ပါ။
သူများပြောတဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုလည်းခေါင်းထဲကထုတ်ပစ်ပါ။ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ့်ထက်ပိုပြီးဘယ်သူသိမှာလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခြားသူပြောတဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကို ခေါင်းထဲကနေ ရှင်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ခေါင်းထဲမှာအမှိုက်တွေသိမ်းမထားပါနဲ့။
တစ်ပတ်ကို ၅ရက် တစ်ရက်ကို နာရီဝက်လောက် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းမဖြစ်မနေလုပ်ပေးပါ။ ကိုယ်ကျန်းမာမှ စိတ်လည်းကျန်းမာမှာပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကျန်းမာရင် စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါနိုင်တော့လို့စိတ်ဖိစိးမှုတွေ၊အားငယ်မှုတွေဝင်လာနိုင်ပါတယ်။အလုပ်မသွားခင်ဖြစ်စေ၊အလုပ်ကပြန်လာရင်ဖြစ်စေနာရီဝက်လောက်အချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ချွေးများများထွက်မှ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူအပုပ်တွေကင်းစင်သွားမှာပါ။
လောကကြီးမှာ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ကိုအကောင်းမြင်စိတ်ထားဖို့ဆိုတာ အခက်သားလား။ကိုယ်ချစ်တဲ့သူလောက်သာပဲအကောင်းမြင်ပေးနေပြီး ကိုယ်သဘောမကျတဲ့သူ ဆိုရင်အဆိုးမြင်တာမဟုတ်တောင်အကောင်းမမြင်တာတော့သေချာပါတယ်။ဘ၀ကြီးကတိုတိုလေးပါ။ဘယ်အချိန်ငေါက်ခနဲသေသွားမလဲဆိုတာမသိနိုင်လို့ အသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာ ကိုယ့်အနားကလူတွေကို ဂရုစိုက်ပါ။အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့တွေးပေးပါ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ တွေးပေးပါ။ ကိုယ့်ကိုတစ်ခြားသူတစ်ယောက်က မုန်းနေတာကိုမကြိုက်ရင် ကိုယ်ကလည်းတစ်ခြားသူတွေကိုမမုန်းပါနဲ့။တွေ့ရဆုံရတဲ့အချိန်ခဏလေးမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမြင်တွေစောင်းနေမယ်၊နေ့စဉ်နဲ့အမျှပူလောင်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်မှာလဲ ကျေနပ်စရာ၊ပျော်ရွှင်စရာအချိန်ဆိုတာ။
တစ်ခါတစ်လေသူများတွေကိုပဲအချိန်ပေးနေပြီး ကိုယ့်အတွက်ကျကိုယ်အချိန်ပေးဖို့ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်လောက်တော့ကိုယ့်အတွက်အချိန်ပေးပါ။ အဲ့ဒီတစ်ရက်မှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါ။၀ါသနာပါတာတွေလုပ်ပါ။
ဒီအချက်လေးတွေကို သေချာလိုက်လုပ်ကြည့်ပါဦး။ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ နေ့ရက်တွေ များလာပါလိမ့်မယ်။
လူတိုငျးဟာ ကိုယျ့ဇာတျလမျးမှာ ကိုယျသာဇာတျလိုကျပါပဲ။ဘဝမှာရှငျသနျလာရတဲ့ အခွအေနခေငျြးမတူညီကွသလို ရှဆေ့ကျလြှောကျရမယျ့လမျးကွောငျးဆိုတာလညျး မတူညီပါဘူး။ဒီလိုမတူညီတာတှစေုပေါငျးထားတဲ့ကမ်ဘာကွီးမှာ စိတျခမျြးခမျြးသာသာ နဲ့နထေိုငျတတျဖို့လိုပါတယျ။အခုခတျေမှာစာအုပျတှထေကျ အှနျလိုငျးမီဒီယာက စာတှကေိုပိုပွီးဖတျလာကွတာတှရေ့ပါတယျ။လူသားတှအေပျေါ အလှမျးမိုးနိုငျဆုံးကရုပျရှငျပွီးရငျ စာပဖွေဈတဲ့အတှကျ စာအုပျဖွဈစေ၊အှနျလိုငျးပျေါမှာရေးသားထားတဲ့စာပဖွေဈစေ လူသားတှအေတှကျအဆိပျအတောကျမဖွဈစပေဲ အကြိုးပွုစနေိုငျတဲ့စာပတှေေ
ဒီနခေ့တျေကွီးထဲမှာစားဝတျနရေေးပွလေညျအောငျလှုပျရှားနရေတဲ့အတှကျ အဆငျမပွမှေုတှလေညျးကွုံတှရေ့မှာဖွဈသလို အခကျအခဲတှတှေလေ့ာ
ရငျစိတျပကျြအားလြော့မိတာတှလေညျးရှိလာနိုငျပါတယျ။နတေတျရငျ ဘဝကွီးက ကနြေပျစရာကွီးပါ။အခု ဒီစာကိုလညျး ဘဝမှာ ပြျောပြျောရှငျရှငျဖွတျသနျးနိုငျဖို့ နညျးနညျးဖွဈဖွဈကူညီပေးနိုငျဖို့မြှျောလငျ့ပွီး မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ဒီအရာတှကေိုသိထားရငျ ဘဝမှာပြျောပြျောရှငျရှငျနထေိုငျနိုငျဖို့လုံလောကျပါပွီ။
၁) ပွောငျးလဲလို့မရတဲ့အရာတှအေတှကျ စိတျပငျပနျးမခံပါနဲ့
ကိုယျကွုံတှရေ့သမြှထဲမှာ ပွောငျးလဲလို့ရတာလညျးရှိသလို ပွောငျးလဲလို့မရတော့တဲ့အရာတှေ ရှိပါတယျ။အထူးသဖွငျ့အတိတျပေါ့။အတိတျဆိုတာပွီးဆုံးသှားပါပွီ။ အတိတျမှာ ကောငျးတာပဲကွုံခဲ့ကွုံခဲ့၊ဆိုးတာပဲကွုံခဲ့ကွုံခဲ့ဘာမှပွောငျးလဲလို့မရပါဘူး။”နလေုံးကွီးကှယျပြောကျသှားတာကိုထိုငျပူဆှေးနမေယျဆိုရငျ လမငျးကွီးထှကျလာတဲ့အခြိနျကို သငျလှတျသှားနိုငျပါတယျ” ဆိုတဲ့စကားရှိသလို ကိုယျ့အတှကျမကောငျးတဲ့ကိစ်စတှကေိုပူဆှေးသောကရောကျနမေယျ ဆိုရငျ အကောငျးတှကွေုံလာတဲ့အခါ သခြောဖမျးဆုပျနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။
ဟနျဆောငျတာက ကနျြးမာရေးအတှကျမကောငျးပါဘူး။စိတျညဈနရေငျ စိတျညဈနတေယျပွောပါ။ ပငျပနျးနရေငျ ပငျပနျးနတေယျပွောပါ။သူမြားကကိုယျ့ပစ်စညျးကိုယူကိုငျတာ ၊ယူသုံးတာမကွိုကျရငျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပါ။ခံစားခကျြကိုပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးမပွောပဲ မွိုသိပျထားပွီး တဈခွားသူ အဆငျပွအေောငျ၊နားဝငျခြိုအောငျပွောနတောက ကွာလာရငျစိတျဖိစီးမှုမြားလာပွီး ကနျြးမာရေးအတှကျထိခိုကျလာနိုငျပါတယျ။စိတျထဲမှာ ဖွဈရငျဖွဈတဲ့အတိုငျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပါ။
လူတှကေ ကိုယျ့အကွောငျးထကျသူမြားအကွောငျးကိုပွောရတာပိုပွီး သဘောကကြွတယျ မဟုတျလား။ဒီလိုပွောကွတဲ့အထဲ ကိုယျလညျးပါနိုငျတယျ၊သူမြားတှလေညျး ကိုယျ့အကွောငျးပွောနိုငျတယျ။သူမြားအကွောငျးပွောလို့ကိုယျ့အတှကျလညျးအကြိုးမရှိ၊သူမြားအတှကျလညျးအကြိုးမရှိဘူးဆိုရငျလကေုနျတာပဲအဖတျတငျတယျဟုတျ! သူမြားက ကိုယျ့အကွောငျးပွောရငျလညျးစိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈခံပွီးတဈခြိနျလုံးခေါငျးထဲထညျ့မထားပါနဲ့။ညအိပျရာဝငျခါနီးရငျ နဖူးပျေါလကျတငျပွီး ငါဒီနသေူ့မြားအကွောငျးပွောခဲ့လား၊အကြိုးရှိလား၊ အကြိုးမရှိရငျနောကျထပျမပွောဖို့၊ပွောခဲ့ဖူးတာတှကေိုလညျးခေါငျးထဲကထုတျပဈပါ။
သူမြားပွောတဲ့ကိုယျ့အကွောငျးကိုလညျးခေါငျးထဲကထုတျပဈပါ။ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျ့ထကျပိုပွီးဘယျသူသိမှာလဲ။အဲ့ဒါကွောငျ့တဈခွားသူပွောတဲ့ကိုယျ့အကွောငျးကို ခေါငျးထဲကနေ ရှငျးထုတျပဈလိုကျပါ။ခေါငျးထဲမှာအမှိုကျတှသေိမျးမထားပါနဲ့။
တဈပတျကို ၅ရကျ တဈရကျကို နာရီဝကျလောကျ ကိုယျလကျလကေ့ငျြ့ခနျးမဖွဈမနလေုပျပေးပါ။ ကိုယျကနျြးမာမှ စိတျလညျးကနျြးမာမှာပါ။ခန်ဓာကိုယျကွီးကမကနျြးမာရငျ စိတျသှားတိုငျးကိုယျမပါနိုငျတော့လို့စိတျဖိစိးမှုတှေ၊အားငယျမှုတှဝေငျလာနိုငျပါတယျ။အလုပျမသှားခငျဖွဈစေ၊အလုပျကပွနျလာရငျဖွဈစနောရီဝကျလောကျအခြိနျပေးပွီးလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့မမပေ့ါနဲ့။ခြှေးမြားမြားထှကျမှ ခန်ဓာကိုယျရဲ့အပူအပုပျတှကေငျးစငျသှားမှာပါ။
လောကကွီးမှာ ကိုယျမဟုတျတဲ့တဈခွားသူတဈယောကျကိုအကောငျးမွငျစိတျထားဖို့ဆိုတာ အခကျသားလား။ကိုယျခဈြတဲ့သူလောကျသာပဲအကောငျးမွငျပေးနပွေီး ကိုယျသဘောမကတြဲ့သူ ဆိုရငျအဆိုးမွငျတာမဟုတျတောငျအကောငျးမမွငျတာတော့သခြောပါတယျ။ဘဝကွီးကတိုတိုလေးပါ။ဘယျအခြိနျငေါကျခနဲသသှေားမလဲဆိုတာမသိနိုငျလို့ အသကျရှငျစဉျကာလမှာ ကိုယျ့အနားကလူတှကေို ဂရုစိုကျပါ။အကောငျးမွငျစိတျနဲ့တှေးပေးပါ။ ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့ တှေးပေးပါ။ ကိုယျ့ကိုတဈခွားသူတဈယောကျက မုနျးနတောကိုမကွိုကျရငျ ကိုယျကလညျးတဈခွားသူတှကေိုမမုနျးပါနဲ့။တှရေ့ဆုံရတဲ့အခြိနျခဏလေးမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျအမွငျတှစေောငျးနမေယျ၊နစေ့ဉျနဲ့အမြှပူလောငျနမေယျဆိုရငျ ဘယျမှာလဲ ကနြေပျစရာ၊ပြျောရှငျစရာအခြိနျဆိုတာ။
တဈခါတဈလသေူမြားတှကေိုပဲအခြိနျပေးနပွေီး ကိုယျ့အတှကျကကြိုယျအခြိနျပေးဖို့ မနေ့တေတျပါတယျ။ တဈပတျကိုတဈရကျလောကျတော့ကိုယျ့အတှကျအခြိနျပေးပါ။ အဲ့ဒီတဈရကျမှာ ကိုယျလုပျခငျြတဲ့အလုပျတှကေိုလုပျပါ။၀ါသနာပါတာတှလေုပျပါ။
ဒီအခကျြလေးတှကေို သခြောလိုကျလုပျကွညျ့ပါဦး။ဘဝမှာ ပြျောရှငျရတဲ့ နရေ့ကျတှေ မြားလာပါလိမျ့မယျ။
ရွေးကြည့် …အဖြေကြည့် အပျော်တမ်း Psycho Test !